Vaovao - Ny fanondrahana rano mitete tsara noho ny famafazana
Ny fanondrahana Sprinkler, izany hoe ny fanondrahana rano, dia fomba fanondrahana mandroso izay mampiasa andiana fitaovana manokana hanaparitahana rano anaty tsindry mankany amin'ny rivotra, mamorona vongan-drano kely, toy ny orana, aondraka mitovy amin'ny tany nambolena, ary fomba fanondrahana mandroso ho mamatsy rano ny voly.
Na izany aza, ny fantson'ny famafazana dia misy fetrany ihany koa: tena voakasiky ny rivotra, ary ny rano mitete dia tsy maintsy hafafina amin'ny haavony alohan'ny hianjerany. Ny làlan-kaleha dia voakasiky ny rivotra, izay manova ny fizarana rano amin'ny fiaramanidina ary misy fiantraikany amin'ny fitifirana ny fitoviana; Rehefa avo ny rivotra ary ambany ny hamandoana, dia ho be ny fahaverezan'ny haingam-pandeha sy ny etona, indraindray mahatratra 10 mihitsy aza % -30% ny rano fanondrahana.
Rano mitete dia mandaitra amin'ny famatsian-drano iray hatramin'ny efatra litatra isan'ora amin'ny tany. Ny tombony amin'nyfanondrahana mitete ny mpamafazana dia hoe kely ny fatiantoka rano vokatry ny etona na runoff.
Rano mitete no rafitra fanondrahana mahomby sy mahomby indrindra. Raha tokony handena ny velaran-tany rehetra kosa ny rano dia ampitaina fotsiny amin'ilay faritra fakany zavamaniry. Ny tanjona voalohany amin'ny fanondrahana mitete dia ny manisy rano amin'ny fotoana ilain'ny zavamaniry azy indrindra sy amin'ny sanda ilaina amin'ny fitomboan'ny zavamaniry.
Drip Irrigation dia azo ampiasaina betsaka amin'ny voly isan-karazany, tanimboly, trano fonenana, tanimboly, zaridaina sns.
Ampitahao amin'ny fanondrahana karazana hafa, misy tombony maro azo ampiasaina amin'ny fampihenana Drip: